Idizayini Ephendulayo ne-Search Search Tipping Point | Martech Zone
Esinye sezizathu zokuthi kungani sidonse amandla okwenza isiza sethu sikhuphuke ngesihloko esisha esenziwe ngomakhalekhukhwini bekungewona nje wonke umsindo okwenziwa yiGoogle nabachwepheshe esikhaleni seSEO. Besizibonela thina ngokubheka amasayithi amaklayenti ethu. Kumaklayenti ethu anamasayithi aphendulayo, singabona ukukhula okukhulu kokuvelayo kosesho lweselula kanye nokwanda kokuvakasha kosesho lweselula.
Uma ungaboni ukuvakashelwa okwandisiwe ku- analytics, kufanele uhlole idatha ye-webmaster. Khumbula, analytics kukala kuphela abantu asebevele befika kusayithi lakho. Abaphathi bewebhu bakala ukuthi isiza sakho sisebenza kanjani emiphumeleni yosesho - noma ngabe izivakashi ziyachofoza noma cha. Njengoba siguqule wonke amaklayenti ethu aya kumasayithi aphendulayo ngonyaka odlule, saqhubeka nokubona ukwanda okuhle kothrafikhi wosesho lweselula.
Futhi awukaqedi okwamanje. Ukuphendula kuyinto eyodwa, kepha ukuqinisekisa ukuthi izinto zekhasi lakho zenzelwe abantu ukuthi badabule izithupha zabo kungenye into. I-Google Search Console inikeza imininingwane eningiliziwe kusayithi lakho nokuthi yini okudingayo ukuze uthuthukise ulwazi lwakho lweselula.
Ungakuqinisekisa Kanjani Ukusebenza Kwakho Kokusesha Kwamaselula
Ukuqinisekisa ukusebenza kosesho lwakho lweselula akunzima. Ngena ngemvume ku I-Google Search Console, hamba uye Sesha I-Traffic> Sesha Izibalo, shintsha isihlungi sakho nebanga ledethi, futhi uzobona ukuthi isayithi lakho lihamba kanjani. Ungabuka kokubili ukuchofoza kwakho nokuvelayo. Njengoba ukwazi ukubona ngesiza sethu, besingaguquguquki kahle kuze kube yilapho idizayini entsha ephendulayo isanda kunikezela ngesikhuthazo esihle.
I-Google imane ikhethe ukwakheka okuphendulayo. Lokhu kufakazelwa kuzinqubo ezahlukahlukene zenjini yokusesha ze-algorithm ngokuhamba kwesikhathi, futhi ikakhulukazi kulolu shintsho lwakamuva kakhulu. Idizayini ephendulayo yenza kube lula ku-Google ukukhasa, ukukhomba, nokuhlela isiza sakho. Landa Umhlahlandlela Ocacile kaMarketo Wokumaketha Kwamaselula Ngolwazi olwengeziwe.
I-infographic: Iya kuselula futhi uyiphendule… noma uye ekhaya!
Tags: usesho lweselula lwe-googleabaphathi bewebhu be-googlei-google webmasters mobileusesho lweselulaukwenziwa kahle kwenjini yokusesha yeselulai-seo yeselulawebmasters